ကလေးက အမှောင်ကြောက်ရွံ့မှုကို ဘယ်လိုကျော်လွှားနိုင်သလဲ - Hello Sayarwon
Dr . Phyu Mon Latt မှ ရေးသားသည်။ 11/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကလေးအတော်များများဟာ အမှောင်ကိုကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ဘီဒိုထဲမှာ၊ အိပ်ရာအောက်မှာ သရဲရှိနေတယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ကလေးရဲ့ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင့်ကလေးကို ဒီကိုကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ကျော်လွှားနိုင်အောင် ကူညီပေးသင့်ပါတယ်။
ကလေးတွေရဲ့ အမှောင်ကို ကြောက်ရခြင်း အကြောင်းရင်း
မိဘအတော်များများဟာ ကလေးတွေက ဘာလို့ အမှောင်ကို ကြောက်လဲဆိုတာကို သိရှိခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိဘအများစုက သူတို့မီးမှိတ်လိုက်ချိန်မှာ ကလေးကြောက်ရွံ့ခြင်းကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးဟာ ရုတ်တရက် အမှောင်ကို ကြောက်ရွံ့နေပြီဆိုရင် အကြောင်းရင်း အချို့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကလေး သန်းပေါင်းများစွာဟာ အမှောင်ထဲမှာ သူတို့ကို အစိမ်းလိုက်ကိုက်စားနိုင်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် တစ်ခု ရှိနေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာ လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ ဘဝအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကလေးတွေမှာ ပိုဆိုးကြပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ အပြည့်အစုံ ဖွံ့ဖြိုးခြင်း မရှိသေးတာကြောင့် သူတို့ဟာ TV programs တွေ၊ စာအုပ်တွေ မှာ ပါဝင်တဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အရာတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံရနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးရဲ့ အမှောင်ကြောက်ရွံ့မှုကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ။
မိဘတွေ အရင်ဆုံးလုပ်သင့်တဲ့အရာကတော့ ကလေးနဲ့ ပိုပြီး ဆက်သွယ်မှု ပြုဖို့ ဖြစ်ကာ ကလေးကို လေးစားပြီး ကလေးဘာတွေ ကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတာ နားလည်တယ်ဆိုတာ ပြသဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးဟာ ညဘက်မှာ နိုးလာပြီး အော်ဟစ်ကာ သင့်အခန်းအတွင်းပြေးဝင်လာပြီး သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြမယ်ဆိုရင်လည်း ဒေါသမထွက်သင့်ပဲ စိတ်တည်ငြိမ်အောင် ထားသင့်ပါတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့ အချက်တွေကို သေချာနားထောင်ပြီး သူတို့ကိုကြောက်ရွံ့အောင် ပုံပြင်တွေကို ပုံကြီးမချဲ့ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအစား ကလေးအတွက် အန္တရာယ် မရှိဘူးဆိုတာ သေချာဖို့ ကလေးအိပ်တဲ့နေရာကို သင်သွားကြည့်မယ်လို့ ကတိပေးသင့်ပါတယ်။
သင်ဟာ အလုံခြုံဆုံးနေရာဖြစ်ပြီး သင်ရှိနေစဉ်မှာ ကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ကလေးကို ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ကြောက်ရွံ့မှုဟာ တကယ်မရှိပဲ အမှောင်ကြောက်တာဟာ ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသင့်ပါတယ်။ ကလေးလိုအပ်ရင် အမှောင်ထဲမှာ ကာကွယ်မှုနဲ့ ပံ့ပိုးမှုကို ပေးသင့်ပါတယ်။
သူတို့ သက်တောင့်သက်သာပြီး လုံခြုံမှု ကို ခံစားရအောင် ကိုင်တွယ်စရာ တစ်ခုခု ပေးထားသင့်ပါတယ်။ အရုပ်၊ အလင်းရောင် အဖျော့ အစရှိတာတွေဟာ သူတို့ အမှောင်ထဲမှာ ကြောက်ရွံ့ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်ဟာ သင့်ကလေးကို အပြည့်အဝ ထောက်ပံ့ပေးနေပြီး သူတို့ဟာ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အထိ ကြောက်ရွံ့မှုကို ပြသနေတုံးဆိုရင်တော့ ကလေးကို ကလေးဆရာဝန်ထံခေါ်သွားပြီး အထူးကုသမှုကို ခံယူစေသင့်ပါတယ်။
Fear of the Dark. http://www.webmd.com/parenting/features/fear-of-the-dark#1. Accessed February 21, 2017.